सिभिल सहकारीको कारण ८ जनाको ज्यान गयो, सिआइबीको टोलि खटियो — Imandarmedia.com
१विवादले घेरिन थालेपछि प्रचण्डलाई बम्पर सरप्राइज दिने तयारी
२इच्छाराजको सम्पत्ति बारे नयाँ खुलासा, यस्तो छ ईच्छाराजको सबैलाई चकित पार्ने सम्पत्ति विवरण
३भारतले दावी गर्दै आएको लिपुलेकमा चिनियाँ सेनाको प्रवेश, भारतमा तरंग
४हेलिकोप्टर दुर्घटनाको सम्भावित कारण खुल्यो, थाहा पाउने सबै चकित
५लिङ्देन नेतृत्वको पहिलो बैठक, कमल थापालाई काउन्टर दिन भए यस्ता निर्णय
६चीनमा उपचार गराईरहेका वर्षमान पुनले सुन्न पर्यो अर्को दुःखद खबर
७सेना प्रमुख चढेको हेलिकप्टर दुर्घ’टना ग्रस्त, के छ अबस्था ?
८कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक
९एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य, पुराना नेतालाई खाना रुचन छोड्यो
१०‘आत्महत्यागर्ने’ मेसिन संचालनमा, कसरी गरिन्छ ‘आत्महत्या’?
११आस्चर्य पार्दै वामदेव गौतमलाई हराएका सञ्जयले ४ वर्षपछि खुलाए चुनाव जित्नुको रहस्य
१२आक्रमणको त्रासबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिले पुटिनलाई दिए कडा चेतावनी
काठमाडौ। सिभिल सहकारीका बचतकर्ताहरूको दर्दनाक कथा : बिरामी पर्दासमेत आफूले जम्मा गरेको पैसा पाएनन्, उपचार खर्च अभावमा आठ निक्षेपकर्ताको ज्यान गयो
पीडितको रकम फिर्ता गर्न दोषीको सम्पत्ति खोजी गर्दै छौँ : डिआइजी धीरजप्रताप सिंह, प्रमुख, सिआइबी। सिभिल सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा कतिले उपचार गर्नसमेत पाएनन् ।
सोही कारण आठजनाको मृत्यु भएको सूचना हामीकहाँ आएको छ । यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ । दोषीलाई कारबाही गर्ने त छँदै छ, डुबेको रकम पीडितलाई कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ, त्यस विषयमा पनि हामी गम्भीर तवरले जुटेका छौँ । त्यसैले पक्राउ परेका सबैको सम्पत्ति खोजी गरिरहेका छौँ । यस्तो छ नालि बेलि।
मनग्य ब्याज दिने भनेपछि नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त प्राविधिक उपरथी डा. गौतमरत्न शाक्यले आफूसँग भएको एक करोड लगेर सिभिल सहकारीमा जम्मा गरे । दु:ख–बिराम पर्दा ब्याजकै रकमले उपचार खर्च जुटाउन सकिने अपेक्षामा थिए । तर, बिमारीले थलिएर उपचार गर्न नसक्दा पनि सहकारीले पैसा नदिएपछि केही समयअघि उनले ज्यान नै गुमाउनुपर्‍यो ।
गौतमरत्नकी श्रीमती मोहनहिरा शाक्यले भनिन्, ‘उहाँ (गौतमरत्न) अचानक बेहोस हुनुभयो । हतार–हतार मेडिसिटी अस्पताल पुर्‍यायौँ । मस्तिष्कमा रगत जमेको रहेछ । एक महिना उपचार गर्दा ३२ लाखको बिल उठ्यो । तिर्ने पैसा थिएन । जम्मा गरेको रकम झिक्न सिभिल सहकारी गयौँ । तर, एक रुपैयाँ पनि दिएन ।’
उनका अनुसार गौतमरत्नलाई मेडिसिटीमा खर्च धान्न नसकेपछि सैनिक अस्पताल छाउनीमा लगियो । चिकित्सकहरूले दिल्ली लैजान सुझाव दिएका थिए । तर, आर्थिक अभावमा परिवारले दिल्ली लैजान सकेन ।
‘सरकारीमा जम्मा भएको आफ्नो पैसा पाएको भए दिल्ली लगेर उपचार गर्न सकिन्थ्यो । तर, सहकारीले ठगेपछि छाउनी अस्पतालमै ६ महिनापछि उहाँको देहान्त भयो,’ उनले भनिन् ।
नेपाल सरकारका पूर्ववरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकारी गोपालबहादुर श्रेष्ठले पनि जीवनभर जम्मा गरेको ३५ लाख लगेर तीन वर्षअघि सिभिल सहकारीमा जम्मा गरे । प्राप्त हुने ब्याजले परिआउने समस्या टार्ने सपना थियो । तर, उनले पनि बिरामी हुँदा ब्याज त के साँवा रकमसमेत पाउन सकेनन् । अन्ततः उपचार खर्च नपुग्दा उनले दुई महिनाअघि प्राण त्यागे ।
छोरा आशिषका अनुसार गोपालबहादुरलाई पिसाबमा संक्रमण भएपछि ग्रान्डी अस्पताल लगिएको थियो । उपचारका क्रममा १७ लाख रुपैयाँ सकियो । रकम अभाव भएपछि आशिष सहकारीको कार्यालयमा हप्ता दिनसम्म धाए । तर, रकम निकासा भएन ।
उनले घटना सुनाए, ‘बुबाले तीन वर्षअघि ३५ लाख रुपैयाँ सहकारीमा राख्नुभएको थियो । उहाँ बिरामी परेपछि उपचारमा ठूलै रकम लाग्यो । ग्रान्डीमा राख्दा १७ लाख सकियो । आफूले जम्मा गरेको पैसा पाइएला भनेर सिभिल सहकारी गएँ । तर, ब्याज त के साँवा पनि दिएन । बुबाको उपचारमा आर्थिक अभाव भयो । अहिले बुबा बितिसक्नुभयो ।’
ललितपुर झम्सिखेलकी संगिता पाण्डे अहिले शोकमा छिन् । उनले श्रीमान् गुमाएको ६ दिन मात्रै भएको छ । उपचार गर्ने पैसा हुन्थ्यो भने श्रीमान्लाई बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने उनलाई लागिरहेको छ । ‘भएभरको पैसा सिभिल सहकारीमा राखियो, श्रीमान् बिरामी पर्दा पटक–पटक याचना गर्दा पनि दिएन । अन्ततः उहाँलाई गुमाउनुपर्‍यो,’ संगिताले दु:ख बिसाइन् ।
उनले १० वर्षअघि नै सिभिल सहकारीमा ७५ लाख जम्मा गरेकी थिइन् । श्रीमान् केन अफुललाई त्यतिवेलै डिमेन्सिया (मस्तिष्कलाई कमजोर पार्ने रोग) भएको थियो । उनले काम गर्न नसक्ने भएपछि ब्याजले भए पनि छोरी पढाउन र घरखर्च चलाउन पुग्छ भनेर भएभरको पैसा सहकारीमा राखेकी थिइन् । उनका अनुसार सुरुसुरुमा ब्याज पनि पाइन् । तर, पछि ब्याज दिन छाड्यो । ब्याज नपाएपछि साँवा निकाल्न खोजिन्, तर सहकारीले बहानाबाजी गरेर टार्दै आयो ।
यता श्रीमान्लाई बिरामले गाल्दै गएपछि उपचार खर्च बढ्न थाल्यो । संगितासँग आर्थिक स्रोतको अरू विकल्प थिएन । तर, पटक–पटक सहकारी पुगेर श्रीमान् गम्भीर भएको याचना गर्दा पनि पैसा दिएन । चाहेजस्तो उपचार गर्न नसक्दा श्रीमान् नै गुमाउनुपर्‍यो ।
‘श्रीमान्लाई डिमेन्सिया भयो । उहाँले काम गर्न सक्नुभएन । ब्याज धेरै दिने भनेपछि १० वर्षअघि ७५ लाख सहकारीमा राखेँ । सोही ब्याजले छोरी पढाउने र घरखर्च चलाउने योजना थियो । सुरुमा त ब्याज पाएको पनि हो । तर, पछि दिन छाड्यो । केही वर्षपछि श्रीमान्को उपचार खर्च बढ्दै गयो । तर, अन्य आर्थिक स्रोत थिएन । रकम झिक्न पटक–पटक सहकारी जाँदा पनि पाइएन,’ संगिताले भनिन् ।
सडक विभागका पूर्ववरिष्ठ इन्जिनियर रामबाबु खनालले सिभिल सहकारीमा ७० लाख रुपैयाँ जम्मा गरे । बिरामी हुँदा सहकारीबाट प्राप्त ब्याजले खर्च धान्ने योजना थियो । मूत्रथैलीको बिरामी उनलाई पछि क्यान्सर भयो । उपचारका लागि ठूलो खर्च लाग्ने भयो । छोरा सञ्जीव रकम झिक्न सहकारी पुगे । पैसा पाऊँ भनेर निवेदन दिए । तर, सहकारीले ब्याज, साँवा केही दिएन । अहिले रामबाबुको मृत्यु भइसकेको छ । तर, सहकारीमा डुबेको रकम अझै उठेको छैन ।
‘राम्रो ब्याज पनि दिन्छ र सुरक्षित पनि हुन्छ भनेर बुबाले तराईको जग्गासमेत बेचेर सिभिल सहकारीमा पैसा राख्नुभएको थियो,’ काठमाडौंको हाँडीगाउँ बस्ने छोरा सञ्जीवले भने, ‘उहाँ बिरामी पर्नुभयो । परीक्षण गर्दा क्यान्सर नै देखियो । उपचारमा धेरै रकम लाग्ने भएपछि जम्मा गरेको पैसा झिक्न सहकारी पुग्यौँ । तर, सहकारीले दिएन । त्यत्रो रोग लाग्दा पनि उपचार गर्न आफ्नै पैसा पाउनुभएन । अहिले बुबाको निधन भइसक्यो । सहकारीले ७० लाख अझै दिएको छैन ।’
प्रजातन्त्रकालीन राजपरिषद् सदस्य थिए, यज्ञप्रसाद आचार्य । उनले सिभिल सहकारीमा १६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरे । पछि श्रीमतीको नाममा पनि खाता खोले र थप ३२ लाख रुपैयाँ राखे । सहकारीमा ४८ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो ।
एक वर्षअघि उनलाई बे्रन स्ट्रोक भयो । उपचारका लागि परिवारले मेडिसिटी अस्पताल पुर्‍याए । खर्च धेरै लाग्ने भएपछि छोरा सुरेश जम्मा गरेको पैसा झिक्न सिभिल सहकारी पुगे । तर, सहकारीले दिएन । आचार्यलाई पछि नर्भिक अस्पताल भर्ना गरियो । ६ महिनासम्म अस्पतालमा राखियो । बुबाको उपचारमा खर्च धेरै लाग्ने भएपछि सुरेश फेरि रकम झिक्न सिभिल पुगे । सहकारीले चासै दिएन । अहिले यज्ञप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ ।
सुरेशले भने, ‘बुबालाई वर्ष दिनअघि ब्रेन स्ट्रोक भयो । मेडिसिटी र नर्भिक अस्पतालमा उपचार भयो । निकै खर्च लाग्यो । सहकारीमा बुबाको रकम थियो । झिक्न हामी पुग्यौँ । तर, पाउन सकेनौँ । अहिले त्यो रकम आमाको खातामा ट्रान्सफर भएको छ । तर, अझै झिक्न सकिएको छैन ।’
मुटुकी बिरामी काठमाडौंकी शोभा तुलाधर दुई वर्षअघि अचानक गम्भीर बनिन् । उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरियो । उनका श्रीमान् प्रेमसुन्दरले सहकारीमा ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । श्रीमतीको उपचारका लागि उनले सहकारीबाट पैसा झिक्न खोजे । तर, उनलाई पनि सहकारीले पैसा दिएन । छोरा सलिल तुलाधरका अनुसार शोभाको मृत्यु भइसकेको छ । तर, सहकारीको पचास लाख रुपैयाँ अझै झिक्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौं मरुटोलका राजेन्द्रलाल श्रेष्ठले पनि सहकारीको आफ्नै पैसा नपाउँदा खर्च अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । उनकी श्रीमती मेनुकाले सहकारीमा जीवनभरको कमाइबाट जोगाएको ३१ लाख जम्मा गरेकी थिइन् । तर, श्रीमान् बिरामी हुँदा सहकारीले दिएन ।
काठमाडौंकी इन्दिरा श्रेष्ठको पनि सिभिल सहकारीमा पैसा थियो, तर बिरामी पर्दा उपचार खर्च नपाएर ज्यान गुमाइन् । उनको परिवारका सदस्य पनि जम्मा गरेको रकम लिन सिभिल सहकारी पुगेका थिए । तर, सहकारीले रकम निकासा गरेन ।
अहिलेसम्म आठजना सिभिल सहकारीपीडितले आवश्यक उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा ज्यान गुमाएको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडपीडित संघर्ष समितिका संयोजक उज्ज्वल सत्यालले बताए । ‘सिभिल सहकारीमा रकम जम्मा गरेकाहरूले उपचार खर्चसमेत पाएनन् । उपचार गर्न नसकेर उनीहरूले ज्यान नै गुमाउनुपरेको छ । जानकारीमा आएसम्म आठजना पीडितको यसकारण मृत्यु भइसकेको छ ।’
निक्षेप रकम फिर्ता नपाउँदा उपचार हुन नसकेको र सोहीकारण मृत्यु भएको सूचना नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा पनि पुगेको छ । सहकारीबाट ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा गहन रूपमा अध्ययन भएको सिआइबी प्रमुख डिआइजी धीरजप्रताप सिंहले बताए ।
उनले भने, ‘जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा कतिले उपचार गर्नसमेत पाएनन् । सोहीकारण आठजनाको मृत्यु भएको सूचना हामीकहाँ पनि आएको छ । यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ । दोषीलाई कारबाही गर्ने त छँदै छ । डुबेको रकम पीडितलाई कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ ? त्यस विषयमा पनि हामी गम्भीर तवरले जुटेका छौँ । त्यसैले पक्राउ परेका सबैको सम्पत्ति खोजी भइरहेको छ ।’
आस्चर्य पार्दै वामदेव गौतमलाई हराएका सञ्जयले ४ वर्षपछि खुलाए चुनाव जित्नुको रहस्य